By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 29, 2019 Last updated Aug 29, 2019
Zlatan Ibrahimovic ayaa si maldahan u sheegay inuu ku laaban doono Manchester United hadii kooxda horyaalka Ingiriska u baahan tahay.
United ayaa ka waqtiga xulashooyinka uu ku yar yahay ka dib bixitaankii Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez oo qarka u saaran inuu uu raaco Inter sidoo kale qandaraaskii Zlatan ee MLSayaa dhacayo November.
“Si sahlan ayaan uga ciyaari karaa Horyalka Ingiriska, marka hadii United ay i baahato, waa waykan,” ayuu yiri.
Wuxuu tixraac ku sameeyay isagoo qiray sida ay uga go’antahay LA Galaxy joogisteeda , laakiin heshiiskiisa oo aan waqti badan ka harsaneyn inuu ka ordo wuxuu intaas raaciyay inay wax kaste dhici karaan.
” Galaxy ayaa la jooga hadda, marka waan ka xumahay hadana,” ayuu yidhi.
Waxaan waxdaroo ka soo dhigay Yurub. Waan ku riyaaqay markaste wax qabadkeygii, waxaan haystaa 33 Biladood oo aan halkan keenay anigoo rajeynaya inaan wax uun ka helo halkan xataa.
“Markaa kadib waan arki doonnaa halka ay wax ku dhammaadan.”